Gudiga Gaadiidleyda oo la kala diray | KEYDMEDIA ONLINE
Gudiga Gaadiidleyda oo la kala diray
Wasaaradda Gaadiidka ayaa soo jeedisay in gebi ahaanba la kala diro gudiga, oo lagu eedeeyay inuu la shaqeeyo Kooxda Al-Shabaab.
MUQDISHO, Soomaaliya - Duqa Muqdisho Cumar Filish ayaa shaaciyay Maanta inuu kala diray Guddiga iskaashada Gaadiidleyda gobolka Banaadir, kadib markii loo soo jeediyay eedo ku saabsan inuu si hoose ula shaqeeyo Kooxda Al-Shabaab.
Wasaaradda Gaadiidka Soomaaliya ayaa talo soo jeedin sameysay, iyadoo ka dalbaday Cumar Filish inuu burburiyo gudiga oo ay ku mideysanaayeen dhamaan gaadiika ka shaqeeya Caasimadda. Ma cadda inay sax tahay eeda iyo in kale.
0 Comments Topics: al-shabaab gobolka banaadir muqdisho